एक पारिवारिक वकिल आवश्यक छ जो व्यक्तिगत रूपमा तपाईलाई सहयोग पुर्‍याउँछ?
कहिलेकाँही तपाईं पारिवारिक कानून को क्षेत्र मा एक कानूनी मुद्दा संग सम्झौता गर्न सक्छ। पारिवारिक कानून अभ्यासमा सबै भन्दा साधारण कानुनी मुद्दा सम्बन्धविच्छेद हो। सम्बन्ध विच्छेद कार्यवाही र हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद वकीलहरु को बारे मा अधिक जानकारी हाम्रो तलाक पृष्ठ मा पाउन सकिन्छ। सम्बन्ध विच्छेदको अतिरिक्त, तपाई सोच्न पनि सक्नुहुनेछ, उदाहरण को लागी, तपाईको बच्चाको मान्यता, अभिभावकत्व अस्वीकार, तपाइँको बच्चाहरुको कस्टर्ड प्राप्त गर्ने वा गोद लिने प्रक्रिया…
पारिवारिक मालिकहरू LAW & MORE
के तपाइँ समर्थन गर्न चाहानुहुन्छ? हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
कहिलेकाँही तपाईं पारिवारिक कानून को क्षेत्र मा एक कानूनी मुद्दा संग सम्झौता गर्न सक्छ। पारिवारिक कानून अभ्यासमा सबै भन्दा साधारण कानुनी मुद्दा सम्बन्धविच्छेद हो।
> अभिभावकको अस्वीकार
सम्बन्ध विच्छेद कार्यवाही र हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद वकीलहरु को बारेमा अधिक जानकारी हाम्रो तलाक पृष्ठ मा पाउन सकिन्छ। सम्बन्धविच्छेद बाहेक, तपाई सोच्न पनि सक्नुहुन्छ, उदाहरण को लागी तपाईको बच्चाको मान्यता, अभिभावकत्व अस्वीकार, तपाईको बच्चाहरुको कस्टर्ड प्राप्त गर्ने वा दत्तक दिने प्रक्रिया। यी मुद्दाहरू छन् जुन उचित रूपमा नियमित गर्न आवश्यक पर्दछ तपाईंलाई पछि समस्याहरूको सामना गर्नबाट रोक्नको लागि। के तपाईं पारिवारिक कानूनमा विशेष कानून फर्मको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसोभए तपाईंले सहि ठाउँ फेला पार्नुभयो। Law & More पारिवारिक कानूनको क्षेत्रमा तपाईंलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्दछ। हाम्रो पारिवारिक कानून वकिलहरु व्यक्तिगत सल्लाह संग तपाइँको सेवा मा छन्।
स्वीकृति, हिरासत, अभिभावकत्व र दत्तकत्व अस्वीकार सम्बन्धित मुद्दाहरूको अतिरिक्त हाम्रो पारिवारिक कानून वकिलहरूले पनि तपाईंलाई तपाईंको बच्चाको ठाउँ र पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रक्रियाहरूमा सहयोग गर्न सक्छन्। यदि तपाईं यी मध्ये एक वा बढि मुद्दाहरूसँग व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ भने, पारिवारिक कानूनी वकिलको सहयोग पाउनु बुद्धिमानी हुन्छ जसले तपाईंलाई कानुनी सम्झौतामा मद्दत गर्दछ।
स्वीकृतिले बच्चा र बच्चालाई मान्यता दिने व्यक्ति बीच पारिवारिक कानून सम्बन्ध सिर्जना गर्दछ। अनि श्रीमान्लाई बुबा भनिन्छ, श्रीमतीलाई आमा भनिन्छ। बच्चालाई मान्यता दिने व्यक्ति जैविक बुबा वा बच्चाको आमा हुनु हुँदैन। तपाईं आफ्नो बच्चालाई जन्म भन्दा पहिले, जन्म घोषणाको बखत वा पछि कुनै समयमा स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ।
पारिवारिक वकिलको खाँचो छ?
बच्चा स्वीकार गर्नका लागि सर्तहरू
यदि तपाईं बच्चालाई स्वीकार गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंले केही सर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ। उदाहरण को लागी, एक बच्चा स्वीकार गर्न तपाई १ 16 बर्ष वा माथिको हुनु पर्छ। तर त्यहाँ थप सर्तहरू पनि छन्। तपाईंलाई आमाबाट अनुमति चाहिन्छ। जबसम्म बच्चा १ 16 बर्ष भन्दा ठूलो छैन। जब बच्चा १२ बर्ष वा माथिको छ, तपाईंलाई पनि बच्चाबाट लिखित अनुमति चाहिन्छ। थप रूपमा, तपाईं बच्चालाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न यदि तपाईंलाई आमासँग विवाह गर्न अनुमति दिइएन भने। उदाहरणको लागि, किनकि तपाईं आमाको रगतको नातेदार हुनुहुन्छ। यसबाहेक, तपाईं स्वीकार गर्न चाहानुभएको बच्चाको पहिले नै दुई कानुनी अभिभावक हुन सक्दैन। के तपाई अभिभावकको अधीनमा हुनुहुन्छ? त्यो अवस्थामा तपाईलाई सब सब जिल्ला अदालतबाट अनुमति चाहिन्छ।
गर्भावस्थामा एक बच्चा स्वीकार
यसले गर्भमा रहेको बच्चाको पालनालाई जनाउँछ। तपाईं बच्चालाई नेदरल्याण्डको कुनै पनि नगरपालिकामा स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। यदि (गर्भवती) आमा तपाईंसँग आउँदैनन् भने, उनले स्वीकृतिका लागि लिखित अनुमति दिनुपर्दछ। के तपाईंको पार्टनर जुम्ल्याहा बच्चाहरूसँग गर्भवती छ? त्यसोभए स्वीकृति दुबै बच्चाहरूमा लागू हुन्छ जुन तपाईंको साथीको समयमा गर्भवती छ।
बच्चाको घोषणाको बखत बच्चा स्वीकार गर्दै
तपाईं आफ्नो बच्चालाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं जन्म रिपोर्ट गर्नुभयो। तपाईंले बच्चाको जन्म भएको नगरपालिकामा जन्म रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ। यदि आमा तपाईंसँग आउँदिन भने, उनीले स्वीकृतिका लागि लिखित अनुमति दिनु पर्दछ।
पछि मितिमा बच्चा स्वीकार्दछु
यो कहिलेकाँही हुने गर्छ जब बच्चाहरू धेरै लामो वा ठूलो उमेर सम्म स्वीकार गरिदैनन्। स्वीकृति नेदरल्याण्ड्स को प्रत्येक नगरपालिका मा सम्भव छ। १२ बर्षको उमेरदेखि तपाईंलाई बच्चा र आमाबाट लिखित अनुमति चाहिन्छ। यदि बच्चा पहिले नै १ 12 बर्षको छ भने तपाईंलाई बच्चाबाट मात्र अनुमति चाहिन्छ।
बच्चालाई स्वीकार गर्दा नाम छनौट गर्दै
तपाईंको बच्चाको पहिचानमा एक महत्त्वपूर्ण पक्ष, नाम छनौट हो। यदि तपाइँ स्वीकृतिको समयमा आफ्नो बच्चाको थर छनौट गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं र तपाईंको साथी सँगै नगरपालिका जानु पर्छ। यदि बच्चा स्वीकृति पाउँदा १ 16 बर्ष भन्दा माथिको भयो भने बच्चाले उसको उपनाम छनौट गर्दछ जुन उसले वा उसले राख्नुपर्दछ।
स्वीकृति को नतीजाहरु
यदि तपाईं एक बच्चा स्वीकार गर्नुहुन्छ, तपाईं बच्चाको कानुनी अभिभावक बन्नुहुन्छ। तपाईंसँग त्यसपछि केही अधिकार र दायित्वहरू हुनेछ। बच्चाको कानुनी प्रतिनिधि बन्नको लागि, तपाईंले अभिभावकीय अधिकारको लागि पनि आवेदन दिनै पर्छ। बच्चालाई स्वीकार गर्नुको अर्थ निम्न हुन्छ:
• कानूनी बन्धन बच्चा र बच्चालाई स्वीकार्ने व्यक्तिको बीचमा सिर्जना हुन्छ।
He बच्चा वा बच्चा २१ बर्ष उमेर नपुगुञ्जेल तपाईको बच्चाको देखभाल दायित्व हुन्छ।
And तपाईं र बच्चा एक अर्काको कानुनी उत्तराधिकारी बन्नुहुन्छ।
• तपाइँ बच्चाको आडनामा छोटकरीता आमा संग स्वीकृति को समय मा।
Child बच्चाले तपाईंको राष्ट्रियता प्राप्त गर्न सक्दछ। यो तपाईको देशको कानूनमा निर्भर गर्दछ।
के तपाईं आफ्नो बच्चालाई पहिचान गर्न चाहानुहुन्छ र तपाईंसँग अझै पनि पोषण प्रक्रिया बारे प्रश्नहरू छन्? हाम्रो अनुभवी परिवार कानून वकिलहरु लाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
जब बच्चाको आमा बिहे हुन्छ, उनको पति बच्चाको बुबा हुन्छन्। यो दर्ता गरिएको साझेदारीमा पनि लागू हुन्छ। यो सम्भव छ प्यारेन्टहुड अस्वीकार गर्न। उदाहरणका लागि, किनभने पति / पत्नी बच्चाको जैविक बुबा होइनन्। अभिभावकको अस्वीकार बुबा, आमा वा बच्चा आफैले अनुरोध गर्न सक्दछन्। अस्वीकारको परिणाम हुन्छ कि कानुनी बुबालाई बुबाले कानून मान्दैन। यो retroactively लागू गर्दछ। कानुनले बहाना गर्दछ कि कानूनी बुबाको मातृत्व कहिल्यै अस्तित्वमा थिएन। यसको उदाहरणका लागि परिणामहरू तिनीहरूका हकवाला को हो।
जहाँसम्म, त्यहाँ तीनवटा केसहरू छन् जसमा अभिभावकको अस्वीकार सम्भव छैन (वा अब लामो छैन):
; यदि कानूनी बुबा बच्चाको जैविक बुबा पनि हो;
The यदि कानूनी बुबाले आफ्नी पत्नी गर्भवती भएको कुराबाट सहमत भए भने;
The यदि कानुनी बुबा विवाह हुन अघि नै उनलाई थाहा भइसकेको थियो कि उनको भावी पत्नी गर्भवती थिई।
Last अन्तिम दुई घटनाहरूमा एक अपवाद बनाइन्छ जब आमा बच्चाको जैविक बुबाको बारेमा इमानदार हुनुहुन्न।
अभिभावकलाई अस्वीकार गर्नु महत्त्वपूर्ण निर्णय हो। को परिवार वकिल Law & More तपाईले यो महत्वपूर्ण निर्णय गर्नु अघि तपाईलाई उत्तम तरिकामा सल्लाह दिन तयार हुनुहुन्छ।
नाबालिग केटालाई आफैले केही निर्णय लिन अनुमति छैन। यसैले बच्चा एक वा दुवै अभिभावकको अधीनमा छ। प्रायः आमाबुवाहरूले आफैले आफ्ना बच्चाहरूको कस्टडी पाउँदछन्, तर कहिलेकाहिँ तपाइँले अदालतको प्रक्रिया मार्फत वा आवेदन फारम मार्फत हिरासतको लागि आवेदन दिन पर्छ।
यदि तपाइँसँग बच्चाको हिरासत छ भने:
• तपाईं बच्चाको हेरचाह र पालनपोषणको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ।
• तपाईंसँग प्रायः मर्मत दायित्व हुन्छ, यसको मतलब तपाईंले हेरचाह र शिक्षाको खर्च (१ 18 वर्षको उमेर सम्म) र बस्ने र अध्ययन गर्ने खर्चहरू (१ 18 देखि २१ वर्षको उमेरदेखि) तिर्नु पर्छ।
• तपाईं बच्चाको पैसा र सामानहरू प्रबन्ध गर्नुहुन्छ;
• तपाईं उसकी वा उनको कानूनी प्रतिनिधि हुनुहुन्छ।
बच्चाको संरक्षणको लागि दुई तरिकाले व्यवस्था गर्न सकिन्छ। जब एक व्यक्तिलाई हिरासतमा लिन्छ, हामी एक टाउकोको हिरासतको बारेमा बोल्छौं, र जब दुई व्यक्तिको हिरासत हुन्छ, यो संयुक्त हिरासतमा पर्दछ। अधिकतम दुई व्यक्तिको हिरासत हुन सक्छ। तसर्थ, तपाईं अभिभावकीय अधिकारका लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्न यदि दुई व्यक्तिको पहिल्यै बच्चाको हिरासत छ।
तपाईंले कहिले बच्चाको संरक्षण गर्नुहुन्छ?
तपाईं विवाहित हुनुहुन्छ वा तपाईंसँग दर्ता गरिएको साझेदारी छ? त्यसोभए दुबै अभिभावकको बच्चाको संयुक्त हिरासत हुन्छ। यदि यो केस हैन भने, केवल आमालाई स्वचालित रूपमा हिरासत दिइनेछ। के तपाईं आफ्नो बच्चाको जन्म पछि आमा बुबाको रूपमा विवाह गर्नुहुन्छ? वा तपाईं एक दर्ता गरिएको साझेदारीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ? यस्तो अवस्थामा, तपाइँ स्वचालित अभिभावकीय अधिकार प्राप्त गर्नुहुनेछ। शर्त यो हो कि तपाईंले बच्चालाई बुबाको रूपमा स्वीकार्नु भएको छ। अभिभावकीय अख्तियार प्राप्त गर्न तपाईको उमेर १ 18 बर्ष भन्दा कान्छो नहुनु, अभिभावकको अधीनमा रहनु वा मानसिक विकार हुन सक्छ। १ 16 वा १ 17 वर्ष उमेरको नाबालिग आमाले बच्चाको संरक्षणको लागि उमेरको घोषणाको लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्छ। यदि कुनै पनि अभिभावकको हिरासतमा छैन भने न्यायाधीशले अभिभावक नियुक्त गर्दछ।
सम्बन्ध विच्छेद को मामला मा संयुक्त हिरासत
सम्बन्ध विच्छेदको आधार यो हो कि दुबै आमा बुबा दुवै संयुक्त पक्राउमा छन्। केहि केसहरूमा अदालतले यो नियमबाट विचलित गर्न सक्दछ यदि यो बच्चाको हितमा छ भने।
के तपाइँ तपाइँको बच्चा माथि कब्जा प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ वा के तपाईं अभिभावकीय अधिकार सम्बन्धी अन्य प्रश्नहरू हुनुहुन्छ? त्यसोभए कृपया हाम्रो एक अनुभवी पारिवारिक वकिललाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी तपाईंसँग सोच्न खुशी छौं र अभिभावकीय अधिकारका लागि आवेदन दिन मद्दत गर्नेछौं!
नेदरल्याण्ड्स वा विदेशबाट बच्चा अपहरण गर्न चाहने जो कोहीले केही सर्तहरू पूरा गर्नै पर्दछ। उदाहरण को लागी, तपाई कम्तिमा १ adop बर्ष भन्दा कान्छी हुनुभएको हुनुपर्छ तपाईले अपनाउनु पर्ने बच्चाहरु भन्दा। नेदरल्याण्ड्सबाट बच्चा अपनाउने सर्तहरू विदेशबाट बच्चालाई अपनाउने शर्तहरू भन्दा फरक छ। उदाहरण को लागी, नेदरल्याण्ड्स मा एक गोद लिन को लागी गोद ले बच्चाको सबै भन्दा राम्रो हित छ। थप रूपमा, बच्चा नाबालिग हुनुपर्दछ। यदि तपाइँले गोद लिन चाहानु भएको बच्चाको उमेर १२ बर्ष वा सो भन्दा ठूलो छ भने, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्राको लागि उसको सहमति आवश्यक पर्दछ। थप रूपमा, नेदरल्याण्ड्सबाट बच्चाको गोद लिन महत्वपूर्ण शर्त यो हो कि तपाईंले कम्तिमा एक वर्षको लागि बच्चाको हेरचाह गर्नुभयो र हुर्काउनुभयो। उदाहरणका लागि पालक पालक, अभिभावक वा चरण-अभिभावकको रूपमा।
विदेशबाट बच्चाको गोद लिनका लागि यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले अहिलेसम्म 42२ बर्षको उमेर पुग्नु भएको छैन। विशेष परिस्थितिहरूमा अपवाद लिन सकिन्छ। यसबाहेक, निम्न सर्तहरू विदेशबाट बच्चाको गोद लिन लागू हुन्छ।
• तपाईं र तपाईंको पार्टनरले न्यायिक कागजात प्रणाली (जेडीएस) निरीक्षण गर्न अनुमति दिनु पर्दछ।
Old सब भन्दा पुरानो धर्मद्रोही अभिभावक र बच्चा बीचको उमेर फरक 40० बर्ष भन्दा बढी हुन सक्दैन। विशेष परिस्थितिको मामलामा, एउटा अपवाद पनि बनाउन सकिन्छ।
Health तपाईंको स्वास्थ्य गोद लिन बाधा हुन सक्दैन। तपाईंले मेडिकल जाँच गर्नुपर्नेछ।
• तपाई नेदरल्याण्डमा बस्नु पर्छ।
Foreign जबदेखि विदेशी बच्चा नेदरल्याण्ड्स जान्छन्, तपाईले बच्चाको हेरचाह र हुर्काउने खर्चहरू प्रदान गर्न बाध्य हुनुहुन्छ।
जुन देशमा धर्मपुत्र अपनाइएको बच्चाबाट आएको छ त्यसले गोद लिन पनि सर्तहरू लगाउँदछ। उदाहरण को लागी, तपाईको स्वास्थ्य, उमेर वा आयको बारेमा। सिद्धान्त रूप मा, एक पुरुष र एक महिला मात्र विदेश मा एक बच्चा लाई अपनाउन सक्छन् यदि तिनीहरू विवाहित छन्।
के तपाईं नेदरल्याण्ड्स वा विदेशबाट बच्चा अपहरण गर्न चाहानुहुन्छ? यदि हो भने, प्रक्रिया र तपाईंको अवस्थामा लागू हुने विशेष सर्तहरूको बारेमा राम्ररी जानकारी दिनुहोस्। को परिवार कानून वकिल Law & More यस प्रक्रियाको दौरान तपाईंलाई सल्लाह दिन र मद्दत गर्न तयार छन्।
एक ठाँउ एक धेरै कठोर उपाय हो। यो प्रयोग गर्न सक्दछ जब यो तपाईंको बच्चाको सुरक्षाको लागि उत्तम हो कतै कतै कतै बस्नुहोस्। एक आउटप्लेसमेन्ट सधैं सुपरिवेक्षणको साथ हातमा जान्छ। एक आउटस्प्लेटिमेन्टको उद्देश्य भनेको यो निश्चित गर्नु हो कि तपाईंको बच्चा निश्चित अवधि पछि फेरि घरमा बस्न सक्दछ।
तपाईंको बच्चालाई घरबाट बाहिर जानका लागि अनुरोध युवा केयर वा बाल हेरचाह तथा संरक्षण बोर्ड द्वारा बाल न्यायाधीश समक्ष पेश गर्न सकिन्छ। त्यहाँ ठाँउका विभिन्न रूपहरू छन्। उदाहरण को लागी, तपाइँको बच्चा एक पालनपोषण परिवार वा केयर होम मा राख्न सकिन्छ। यो पनि सम्भव छ कि तपाईंको बच्चा परिवारको साथमा राखिएको छ।
यस्तो अवस्थामा तपाईले विश्वासयोग्य वकिललाई काममा लिन सक्नुहुन्छ। मा Law & More, तपाइँको चासो र तपाइँको बच्चाको ती सर्वोपरि हो। यदि तपाईंलाई यस प्रक्रियामा सहयोग चाहिएमा, उदाहरणका लागि तपाईंको बच्चालाई घरबाट टाढा राख्नबाट रोक्नको लागि, तपाईं सही ठाउँमा आउनुभएको छ। हाम्रो वकीलहरू तपाईंलाई र तपाईंको बच्चालाई सहयोग गर्न सक्दछन् यदि बाहिरी स्थानको लागि अनुरोध पेस गरिएको छ वा बालबालिकाको न्यायाधीश समक्ष पेश गर्न सकिन्छ।
को परिवार कानून वकिल Law & More मार्गदर्शन र मद्दत गर्न सक्दछ राम्रो कानून मा पारिवारिक कानून को सबै पक्षहरु व्यवस्थित गर्न को लागी। हाम्रो वकिलहरु पारिवारिक कानून को क्षेत्र मा विशेष ज्ञान छ। के हामी जान्न उत्सुक छौं कि हामी तपाईंको लागि के गर्न सक्दछौं? त्यसोभए सम्पर्क गर्नुहोस् Law & More.